RW Kheyre oo kulan la qaatay dhalinyarada Kismaayo • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / RW Kheyre oo kulan la qaatay dhalinyarada Kismaayo
RW Kheyre oo kulan la qaatay dhalinyarada Kismaayo
March 13, 2019 - By: Mohamed Jeenyo
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, ayaa magaalada Kismaayo kulan xogwareysi ah kula yeeshay dhallinyarada ku nool magaalada.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo dhallinyarada u sheegay in hoggaanka dalku uu muhiimmad gaar ah siinayo arrimaha dhallinyarada ayaa uga jawaabay su’aalo ay ka waydiiyeen xiriirka dawladda dhexe iyo dawlad gobaleedyada, qorshaha amniga, waxbarashada, caafimaadka, doorashooyinka, Shaqo abuurka dhallinyarada, Kobcinta dhaqaalaha, maal-gashiga, iyo barnaamijka Cafinta daynta lagu leeyahay dalka.
Dhammaan mas’uuliyiinta dawladda federaalka iyo dawlad gobaleedyada ayuu sheegay Ra’iisul Wasaaruhu in laga doonayo wada shaqayn buuxda ayna mas’uuliyadi ka saarantahay u adeegidda bulshada Soomaaliyeed meel waliba oo ay joogaan, isaga oo intaa raaciyay in ummadda Soomaaliyeed kula xisaabtamayaan inta ay xilka hayaan waxa ay dhisaan iyo waxa ay qaldaan.
Ra’iisul Wasaare Khayre ayaa sheegay in Sugidda amniga ay ku xirantahay hagaajinta dhaqaalaha, siyaasadda, arrimaha bulshada, isaga oo intaa raaciyay in shaqo la’aanta dhalinyarada, musuqa, qabyaaladda, nin jeclaysiga ay qayb ka qaadanayaan amni darrada, loona baahanyahay in laga wada shaqeeyo hannaankii wax looga qaban lahaa.
Mudane Xasan Cali Khayre ayaa dhallinyarada uu kulanka la yeeshay u sheegay in dawladdu ay dib-u-habayn ballaaran ku wado dhaqaalaha, ciidanka qaranka, siyaasadda iyo horuamrinta arrimaha bulshada si loogu guulayso himilada ummadda Soomaaliyeed, loona jeexo waddadii horumarka dalka.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa dhallinyarada u cadeeyay in hagaajinta mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed ay ku xirantahay sida waxbarasho tayo leh dalka looga hir-geliyo, arrintaasna ay dawladdu dadaal badan gelinayso.